FTA dia manentana ireo masoivohon'ny fitaterana amerikana hampiakatra ny tahan'ny vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Fitaterana » FTA dia manentana ireo masoivohon'ny fitaterana amerikana hampiakatra ny tahan'ny vaksiny
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny Federal Transit Administration (FTA) dia miantso ny mpitondra fitaterana hizara izany vaovao izany amin'ny mpiasa ary hanao izay rehetra azonao atao mba hampirisihana ny fanaovana vaksiny eo amin'ny mpiasa.
Mitombo hatrany ny tahan'ny vaksinin'ny COVID-19 manerana an'i Etazonia.
Ny fisalasalana manoloana ny vaksinina dia nianjera ihany koa tao amin'ny firenena.
Ireo masoivohon'ny fitaterana an-tanety amerikana dia nanentana mba hiantohana ny fanaovana vaksiny an'ireo mpiasan'ny fiara fitaterana.
Raha mbola miakatra manerana ny Etazonia ny tahan'ny vaksinin'ny COVID-19, ny Federal Transit Administration (FTA) dia namporisika ireo masoivohon'ny fitaterana mba hiantohana ny mpiasa sy ny vondrom-piarahamonin'izy ireo hanana ny fotoana rehetra ahazoana io vaksininy io.
Raha ny filazan'ny Mayo Clinic sy ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC), tao anatin'ny roa volana lasa, Amerikanina maro no nanomboka nanao vaksiny fanoherana ny COVID-19. Nandritra io fotoana io no nankatoavan'ny Sampan-draharahan'ny sakafo sy zava-mahadomelina ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech COVID-19 tamin'ny 23 Aogositra.
Nidina ihany koa ny fisalasalana manoloana ilay vaksinina, hoy ny fanadihadiana natao tany Ipsos farany teo. Ny 14 isan-jaton'ny Amerikanina ihany izao no milaza fa tsy azo vaksina mihitsy izy ireo.
Federal Transit Administration (FTA) miantso ireo mpitarika ny fitaterana hizara izany vaovao izany amin'ny mpiasa, ary hanao izay rehetra vitanao mba hampirisihana ny fanaovana vaksiny eo amin'ny sehatry ny asanao. Ny masoivoho sasany dia nanokana fotoana karama mba handraisana vaksiny, valisoa vola na karatra fanomezana mba handrisihana ireo mpiasa hanao vaksiny.
Ho fanampin'izay, ho an'ireo masoivoho niasa mafy hamporisika ny fanaovana vaksiny eo amin'ny fiaraha-monina misy anao, antenainay fa hanohy ireo ezaka ireo ianareo ary hanomboka ireo vaovao. Betsaka ny Amerikanina no maniry ny vaksininy ary ny fifindrana dia afaka manampy azy ireo hanatrika fotoana voatondro na hitondra vaksiny ho an'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Mba hanampiana hizara ny hafatra momba ny vaksiny ao amin'ny vondrom-piarahamoninao, ny vinavinan'ny CDC any amin'ny faritry ny distrika amin'ny fisalasalana amin'ny vaksiny ho an'ny COVID-19 dia afaka mamantatra ireo faritra ao amin'ny faritra misy ny rafitra fitaterana mety mila fanampiana fanampiny hanatrarana ilay vaksiny.
Ny vaksiny no fomba mahomby indrindra hiarovana ny tenanao sy ireo manodidina anao amin'ny fifanarahana COVID-19. Mba hampitomboana ny fiarovana amin'ny Delta variant ary hisorohana ny mety hampielezana azy amin'ny hafa, ny CDC dia manoro hevitra ny tsirairay mba hanao vaksiny haingana araka izay tratra. Nentanin'ny FTA ny mpiasan'ny zotram-piaramanidina - sy ireo masoivohon'ny fifamoivoizana iasan'izy ireo - hanao drafitra hanaovana vaksiny ny tenany ary hanohy hanamora ny fahazoana miditra amin'ireo toerana fanaovana vaksiny ho an'ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina izay mbola tsy nahazo tifitra.
Manohana ny ezaka fanaovana vaksiny ny maso i FTA amin'ny fanomezana vatsim-pianarana ambanin'ny drafitra fanavotana amerikanina hanampiana azy ireo handoa ireo fandaniana ireo ary hampirisika ny mpitarika fitaterana hanome serivisy ahafahan'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo, anisan'izany ny mpiasan'izy ireo, hahazo ny tifitra. Ireo masoivohom-pitaterana maniry hahita vaovao misimisy momba ny fahazoana mamatsy vola dia tokony hitsidika ny FAQ an'ny FTA momba ny COVID-19.
FTA dia mamporisika ireo masoivohon'ny fitaterana ihany koa hampiasa ny CDC, ny Sampan-draharahan'ny fitaterana any Etazonia ary ny fitantanana ny fiarovana sy ny fahasalamana (OSHA) Toolkit manampy amin'ny fampitomboana ny fahatokisana sy ny fandraisana ireo vaksinin'ny COVID-19 eo amin'ireo mpiasa miasa.